Dharka xagaaga ee la isticmaalay - hissenglobal.com
Dharka Xagaaga ee Gacanta Labaad
Guangzhou waa magaalo ku taal koonfurta Shiinaha. Cimilada halkan aad bay ugu kulul tahay sida Afrika oo kale, dadku waa badan yihiin (in ka badan 10 million), waxaa dalka Shiinaha ka jira tirada ugu badan ee jaamacadaha, dadku aad ayay u wanaagsan yihiin, xirashada dharka calaamadeysan ayaa muujinaya in qofka uu yahay mid moodi karo. Dhammaan tani waxay ka dhigaysaa Guangzhou asalka tayada ugu wanaagsan ee loo isticmaalo dharka xagaaga ee Shiinaha, iyo xitaa adduunka. Warshadu waxay ku taal degmada Guangzhou Baiyun, Hissen Global, sidaas darteed waxay ka soo horjeedaa alaab-qeybiyeyaasha badan ee dharka xagaaga. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye loo isticmaalo dharka xagaaga ee Shiinaha, ka dib Hissen Global wuxuu noqon doonaa lammaanahaaga lagu kalsoonaan karo oo kaa caawin doona inaad hesho badeecadaha si fiican u kooban
dharka dumarka loo isticmaalo
loo isticmaalo Dharka Ragga
Labis Slik La isticmaalay
Jersey la isticmaalay
Ragga la isticmaalay Jean Surwaal
funaanad Ragga la isticmaalay
Ragga la Isticmaalay Gaaban Asalka ah
Dhar xagaaga oo badan >>
Waa maxay sababta ay u dooratay Dharka Labaad ee Hissen Global
Qalabka Ceyriin ee Tayada Sare leh
Shiinaha warshadda Hissen Global waxay leedahay tayada ugu wanaagsan ee dharka xagaaga ee la isticmaalo taas oo ah armaajo asal ahaan. Hissen Global waxay leeyihiin xasilloon, tayo la isku halayn karo iyo boqolkiiba sare ee dharka astaanta ah.
Sababtoo ah waxaa na taageeray ilaha tayada ugu fiican ee dharka xagaaga ee gacan labaad, Hissen Global wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan marka loo eego tartamayaasha badan. Waxaa ka sii muhiimsan, waxaan sidoo kale haysanaa nidaam maamul oo tayo fiican leh. Warshadayadu waxay leedahay Shahaadada ISO9001 iyo dhammaan shahaadooyinka kale ee caalamiga ah. Shaqaalaheenu waxay qiimeeyaan tayada aad u sarreeya waxayna hubin doonaan in iibsashadaada dharka xagaaga ee Hissen Global uu yahay dalool la'aan, wasakh la'aan, ama daal badan iyo jeex la'aan. Waxaan dammaanad qaadaynaa in dharka xagaaga ee la isticmaalay ee aad soo iibsatay ay buuxin doonaan dhammaan waxyaabaha laga filayo. Haddii aad tahay iibsade oo raacaya tayada, markaa adiga ayaa noo dooranaya. Waxaan ku siinaynaa tayada ugu wanaagsan ee la isticmaalo dharka xagaaga ee Shiinaha!
Ma rabtaa inaad ogaato macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ilaalinta tayadayada?
Waxaan leenahay shuraako badan oo shirkad maraakiib ah. Sidaa darteed, waxaan ku leenahay faa'iido xooggan xagga kharashka dhoofinta marka la barbar dhigo alaab-qeybiyeyaasha kale. Tani waa sabab muhiim ah oo dad badan oo iibsada dharka xagaaga ee la isticmaalo ay noo doortaan. Haddii aad u baahan tahay alaabo degdeg ah laakiin aad ku dhibtoonayso inaad hesho alaab-qeybiye kugu habboon, waxaanu noqon doonaa doorashadaada ugu fiican. Waxaan kaa caawin karnaa inaad u heshid shirkadda maraakiibta ugu waxtarka badan alaabtaada oo aad ku geyso dekeddaada wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Dharka xagaaga ee Hissen Global ayaa leh in ka badan 60 qaybood. Tan waxaa door biday iibsadayaal badan sababtoo ah qaybahayada badan ha kuu fududeeyo inaad samayso weel wax lagu duubot. Tani waxay sidoo kale ka dhigaysaa weelasha faa'iido badan.
Hissen Global waxa uu leeyahay waayo-aragnimo sannado badan oo ku saabsan dejinta. Weelka kale ee 40-foot ah waxay ku raran karaan 600 oo dhar ah, halka sayidkeenna rarka uu raran karo 650 baal, taasoo la micno ah in aad ku badbaadin karto 10% bayl kasta oo xamuul ah. Waxay kuu badbaadin doontaa lacag badan wakhtiga qiimaha xamuulka sare
Si loo siiyo macaamiisheena khibrad wax iibsiga oo wanaagsan, waxaan ku siin doonaa kuwa hadda jira iyo kuwa caanka ah wax soo saarka nool, kormeerka nool, rarista nool, iyo adeegyo kale. Sidan, waxay si fudud u xakameyn karaan dhinac kasta. Haddii aad weli ka welwelsan tahay in lagugu xayiran yahay, fadlan nala soo xidhiidh. Waxaan ku siin doonaa adeeg la isku halayn karo.
Ma rabtaa inaad khibrad u yeelatid adeegeena?
"Aad ayaan ugu qanacsanahay tayada dharka gacanta labaad ee Hissen Global, gaar ahaan funaanadaha dumarka ee gacanta labaad, oo leh midabyo dhalaalaya, tayo aad u wanaagsan, iyo dayr weyn oo ku filan. Waxaan jeclahay funaanadaha caanka ah ee kala duwan."
"Waxaan aad ula dhacay dharka xagaaga ee gacanta labaad ee Hissen Global. Tayadu aad bay u wanaagsan tahay, mana jiraan wax dalool ah, wasakh iyo ilmo toona.”
"Dharka xagaaga ee Hissen Global waa mid aad loo raadsado. Waa tayo wanaagsan oo la awoodi karo. Mar kasta oo ay yimaadaan, waxaa la dhacaya macaamiisha. Qaar badan oo ka mid ah macaamiishayda waxay aqoonsadaan astaanta Hissenglobal, taas oo ka dhigaysa faa'iido. "